Jution Silicone & Rubber (DongGuan) Co., Ltd iri Professional Manufacturer unyanzvi kuva uye mukugadzira silicone zvigadzirwa, dzakawanda dzinoshandiswa Kitchenware uye Housewares. Rakavakwa muna 2005, iri "ari Factory of World" --DongGuan City. Fekitari ndokwenguva nzvimbo pamusoro 8.000 mativi metres, pamusoro 150 unyanzvi dzaishandisa. It kwapfuura SA8000 2014, ISO9001: 2015, ISO14001 2014; uye isu akawana " High uye New Technology Enterprise " Yacho muna 2016.
Zvino fekitari iri raiva simba okugadzira Design chikwata; mumwe zvakarurama muforoma kugadzira okudhindira; Post-vanoumba dhipatimendi; QC dhipatimendi, weDhipatimendi kavha. With 3 anoita yepamusoro CNC machine nzvimbo uye 3 anoita EDM dzomoto muchini tooling; 30 anoita Post-dzichiumbwa muchina hwokubereka, pamusoro 10 Printing & mwaya mutsetse, aivawo hombe Guruva-isina Apex workshop.
With guru simba uye mukuru vatengi, isu kuitisa vakaongorora zvinhu zvose, unhu yave zvinobudirira kudzivirirwa. Tinogona kugadzira gadzira zvigadzirwa maererano chikumbiro vatengi '. zvigadzirwa edu chatengeswa kunyika dzinopfuura 30 uye nharaunda, pamwe Disney, Coca-cola, Nestle, Marlboro, Line Friends, Daiso, Hello-Kitty, L'OCCITANE nevamwe rese nomukurumbira vatengi.
The fekitari yagara mweya "Unhu wokutanga, mutengi pakutanga, chinopfuurira kuvandudzika" musimboti. Pachokwadi kupa matunhu mureza zvinhu uye basa dzinogutsa vatengi. The kambani zvakasimba kuti vane simba, pamwe vepachokwadi uye mweya dzamarudzi kuvandudzika, kuitira kuti vatengi vanogona kunakidzwa yaivakwanira, unhu vimbiso uye nguva pakusununguka.